Global Voices teny Malagasy » Palestina: Hatezerana Noho ny Nahafatifaty Fahatany Zazalahy kely Iray · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Novambra 2018 5:35 GMT 1	 · Mpanoratra Jillian C. York Nandika (fr) i Constance BRIAND, Sylvia Aimée
Sokajy: Israely, Palestina, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Tanora, Vaovao Mafana, Vonjy Voina, Zon'olombelona
Araka ny tatitra iray nataon'ny BBC News , nitifitra nahafaty zazalahy kely iray 10 taona ireo miaramila israeliana nandritra ny fihetsiketsehana nanoherana ny sakana  najoro tao Naalin . Na dia nitifitra an'ireo mpanao fihetsiketsehana hafa tamina bala fingotra aza ireo miaramila ary nandratra olona 18, io zazalahy kely io irery no hany tokana voan'ny bala tena izy.
Nitatitra  ny zava-misy tamin'ny antsipirihany ny Tetikasa Firaisankina miaraka amin'i Palestina [amin'ny teny anglisy]:
Zoma 1 Aogositra, niverina indray nanohy ny ady ho fanoherana ny fakàna ankeriny ny tanin-dry zareo ireo teratanin'i Naalin – izay nanatrika ny fiandrasam-paty an'ilay zazalahy kely iray 10 taona, Ahmed Mousa, sy tanora iray hafa, Yousef Amira, izay maty tao amin'ny hopitalin'i Ramallah. Nanatevina ny laharan'ireo Palestiniana ireo Israeliana sy vahiny mpanao fihetsiketsehana miray hina nandritra ny diabe nataon'izy ireo mankany amin'ny toerana izay nananganana ny Sakana Fanasarahana, toerana nahafatesan'i Ahmed Mousa noho ny tifitra bala teo amin'ny lohany. 100 metatra miala ny toerana, nasiana fefy tsatoka vy marobe napetrak'ireo miaramila mba hanakanana ny fidirana ao amin'ilay toeram-panorenana. Herinandro vitsivitsy lasa izay, nahavita nanatona akaiky an'ireo “bulldozers” ireo mpanao fihetsiketsehana, izay niteraka ny fihisaran'ny asan'ireo mpiasa. Teo am-pikasihana indrindra an'ireo fefy vy ireo no nahafaty an'i Ahmed Mousa.
Ny blaogera Climbing Walls [teny anglisy], izay milaza ny tenany ho “safiotra Amerikana miozolomana ao Palestina” manamarika  ny fisongadinan'i Naalin tany anatin'ireo vaovao haingana:
Tato ho ato, lohateny lehibe ny tanànan'i Naalin, eto farafaha-keliny. Nanohitra ny fanorenana rindrina iray izay mampihena ny ampahantany betsaka fambolen'izy ireo ao a-ntanàna ny mponina. Toy ny asanà vondrona iray vahiny mpanao fihetsiketsehana na Israeliana mandray andraikitra tsy anaty herisetra ireo hetsi-panoherana ireo. Matetika anefa, levon'ny hery ny hetsik'izy ireo. Teo amin'io toerana io no naharaisan'ny zazalahy kely iray ny tifitra tamina bala fingotra teo amin'ny tongotra, nefa efa nofatorana izy, notampenana ny masony. Natsahatra tamin'ny asany nandritra ny folo andro ny manampahefana iray nitazona azy teo ampiandrasana an'ireo fehiny mikasika ny fanadihadiana izay hamaritra na tena nanome baiko hitifitra tokoa izy na tsia. Ary ankehitriny, zazalahy kely iray 9 taona no matin'ny bala. Tranga iray mampalahelo.
DesertPeace [teny anglisy], blaogina Amerikana monina ao Jerosalema, no manao ny fanehoankevitra manaraka  mikasika ny fahafatesan'ilay zaza:
Tadidionareo fotsiny fa ny bala nahafaty an'io zazalahy kely 11 taona io dia fanomezana avy amin'ny governemanta amerikana…
Naneho ny hatezerany ihany koa  ny Jews Sans Frontières [teny anglisy], blaogy iray “manohitra ny sionista”, dia :
Lalao inona no iarahana amin'i Israely? Oh, efa eo ihany, namono zazalahy kely iray hafa i Israely androany. Sa omaly io? Sa ho rahampitso maraina. Ny marina, androany io no nitranga. Jereo ny fitantaran'ny CNN ilay heloka:
Manamafy ireo vavolombelona: “Zazalahy kely Palestiniana iray novonoina nandritra ny fihetsiketsehana”.
JÉRUSALEM (CNN) – nanamafy tamin'ny CNN ireo nanatri-maso fa ny Talata teo, tsy lavitra ny andiana tanora Palestiniana , nitifitra ireo miaramila Israeliana nandritra ny fihetsiketsehana tao Cisjordanie, namono zazalahy kely 9 taona”.
Nitifitra izy ireo “teny akaikin'ny andiana tanora Palestiniana”. Hitanareo, raha tsy tafika tena fatra- mpankato fitsipika manerantany izy ireo, dia ho nitifitra azy ireo ary mety ho mahafaty izany.
Mitondra fijery lany henatra  mikasika an'ireo zava-misy ny blaogy arabo-amerikana KABOfest:
Ireo miaramila israeliana mahantra ireo, miady isanandro manohitra an'ireo mpanao fihetsiketsehana sivily ao Naalin, izay manohitra ny fangalarana ny tanin'izy ireo mba ho tombontsoan'ireo fifanarahana tsy ara-dalàna. Mahatsiaro ho miha voafitaka hatrany ireo miaramila miatrika an'ireo vahoaka izay tsy mety mangina sy tsy manaiky resy. Noho izany, mitifitra an'ireo mpanao fihetsiketsehana ry zareo.
Ary mampatsiahy ny blaogera, tsy dia be resaka:
Tao anatin'ny taona iray monja, zazalahy kely palestiniana maherin'ny 70 no novonoin'ireo miaramila israeliana.
Miara-ory amin'ny fianakavian'i Ahmed Ussam Youssef Mousa izahay. Handry ampiadanana anie izy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/11/129628/
 ny tatitra iray nataon'ny BBC News: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7531741.stm
 fanehoankevitra manaraka: http://desertpeace.wordpress.com/2008/07/30/eleven-year-old-terrorist-killed-by-israeli-soldiers/
 Naneho ny hatezerany ihany koa: http://jewssansfrontieres.blogspot.com/2008/07/as-near-as-damn-it.html
 fijery lany henatra: http://www.kabobfest.com/2008/07/israeli-soldiers-gets-frustrated-kills.html